Malunga nathi-Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd.
Imaski yoNyango elahliweyo
Mask oKhuselo oluDibeneyo (FFP2)
Ukulahla abantwana uMaski
"Fezekisa iimfuno zabathengi kwaye ugqithe kulindelo lwabathengi"
I-Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd ngumenzi oqeqeshiweyo wokhathalelo lwempilo lwakho kunye nemaski yezamayeza, eqhayisa ngendibano yangoku esemgangathweni, izixhobo zokuvelisa eziphezulu kubandakanya umatshini wokukhuphela ozenzekelayo, umatshini wokulungiselela umatshini wokuzenzekelayo we-KN95.
Inkampani iqinisekisiwe ngesatifikethi sobhaliso lwezixhobo zoNyango, isatifikethi seEC kunye nesiqinisekiso seFDA Ukoneliseka komthengi yinjongo yethu kunye nokukhulisa ukukhula kweshishini ngolawulo olomeleleyo, ukuphuculwa kunye nokugqibelela kukuziqhelanisa neyona nto iphambili.
Inkampani isebenze ngokusesikweni inkqubo egqibeleleyo yokwakha kunye nentengiso ebanzi kunye nenethiwekhi, kwaye iseke ubudlelwane obulungileyo bentsebenziswano namashishini amaninzi. Senza ngokukodwa kulawulo lwezixhobo zokhuselo lwasekhaya nangaphandle. Inkampani ihlala ibambelela kumgaqo-nkqubo wolawulo "wokugcina ingqibelelo, ukuhlala phantsi kwemvumelwano kunye nokujonga umgangatho", kwaye ibonelele amawaka eemveliso kunye nezisombululo ezenziwe ngokwezifiso kubathengi bayo. Yindawo enkulu, ebanzi kunye nokhuseleko kwishishini lezixhobo zentengiso e-daquanzhou, zikunika ukhuselo lokukhusela kunye neenkonzo eziphezulu. Ngokweemfuno zakho zobuqu, siya kukubonelela ngeenkonzo zokufumana iingcali, kwaye siyile inkqubo yokhuselo nokhuseleko lwempilo kunye nephothifoliyo yemveliso ehlangabezana nezona mfuno zakho kunye nombutho wakho.
Esikunikeza kona kungekuphela kweemveliso, kodwa kunye nezisombululo ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo zemveliso! Siza kuqhubeka nokulandela ingcinga yenkonzo "yokuhlangabezana neemfuno zabathengi, sidlule kulindelo lwabathengi", kwaye sikubonelele ngeemveliso kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu. Sijonge ngokunyanisekileyo ukusebenzisana nani!
I-Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd.
Inombolo yomnxeba: 0086 18616356189